WARKA DIIWAANKA: Gudigu wuxuu ugu deeqay $ 255K daraasadaha suurtagalka ah ee 6 bulsho - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|WARKA DIIWAANKA: Guddigu wuxuu ku deeqay $ 255K daraasadaha suurtagalka ah ee 6 beelood
WARKA DIIWAANKA: Guddigu wuxuu ku deeqay $ 255K daraasadaha suurtagalka ah ee 6 beelood
OLYMPIA, WA - Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington (CERB) ayaa maanta ansixiyay $ 255,000 oo deeqo ah oo loogu talagalay horumarinta kaabayaasha bulshada iyo daraasadaha fursadaha dhaqaale ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga iyo shaqo abuurka magaalooyinka Washougal, Aberdeen iyo Tumwater, Pacific County iyo Cowlitz iyo Kalispel qabiilooyinka.
Gobolka Clark - $ 50,000 oo deeq ah Qabiilka Cowlitz Indian loogu talagalay Qorshaha Goobta Boos celinta Hindida ee Cowlitz iyo Daraasadda Suurtagalnimada Horumarinta. Tani waa daraasad suurtagal ah oo lagu horumarinayo qorshe guud oo loogu talagalay qiyaastii 156 hektar oo ah Boos celinta Hindida ee Cowlitz ee horumarinta dhaqaalaha mustaqbalka. Lacagta CERB waxaa la barbar dhigay $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Clark - $ 50,000 oo deeq ah Magaalada Washougal loogu talagalay Xarunta Gaadiidka ee Magaalada Washougal - Daraasadda Kaabayaasha. Tani waa daraasad suurtagal ah oo lagu horumarinayo qorshe gaadiid iyo kaabayaal, oo loogu talagalay 85 hektar oo ah dhul banaan iyo dib u habeyn oo ku yaal Degmada Xarunta Magaalada. Sanduuqa CERB waxaa u dhigma $ 25,000 ilaha maxalliga ah.
Degmada Grays Harbor - $ 50,000 oo deeq ah Magaalada Aberdeen loogu talagalay SR520 Qorshaha Falanqaynta Beddelka Basin. Tani waa daraasad suurtagal ah oo lagu sameeyo falanqaynta ugu sarraysa uguna wanaagsan ee loogu talagalay SR520 Castin Basin (Pontoon Site) ee Aberdeen. Sanduuqa CERB waxaa la barbar dhigay $ 18,000 oo ah ilaha maxalliga ah.
Gobolka Baasifigga - $ 50,000 oo deeq ah Gobolka Baasifigga loogu talagalay Maareynta Biyaha Duufaanta ee Qorshaha Goobta Hardwoods Mill. Tani waa daraasad suurtagal ah oo lagu horumarinayo qorshe maareyn ballaaran oo ku saabsan maaraynta biyaha duufaanka ee goobta loo yaqaan 'Pacific Hardwoods'. Lacagta CERB waxaa la barbar dhigay $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Pend Oreille - $ 25,000 oo deeq ah Kalispel Qabiilka Hindida Daraasadda Ku-Meel Gaarka ah iyo Adeegyada. Tani waa daraasad suurtagal ah oo lagu horumarinayo laguna kala shaandheyn karo qorshaha hoyga oo ay ku jiri doonaan adeegyo iyo adeegyo bilaash ah Kalispel Tribe's Commerce Park ee Cusick, WA. Lacagta CERB waxaa la barbar dhigay $ 8,333 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Thurston - $ 30,000 oo deeq ah Magaalada Tumwater loogu talagalay Qorshaha Soosaarida iyo Kala-Bixinta Farsamo-yaqaannada. Tani waa daraasad suurtagal ah oo lagu horumarinayo qorshe guud oo loogu talagalay Xarunta Farshaxanka iyo Kala-bixinta Farshaxanka kaas oo bixin doona waddo lagu horumariyo barnaamij laguna kalsoonaan karo maal-gashiga loogu talagalay tas-hiilaadyada ganacsiga ee qaab-dhismeedka habboon. Lacagta CERB waxaa la barbar dhigay $ 10,000 ilaha maxalliga ah.
“Mashaariicda CERB waxay matalayaan iskaashi muhiim ah oo udhaxeeya gobolka iyo bulshooyinka maxalliga ah, taasoo ka dhalatey muhiimadda dhaqaale ee kor loo qaaday. Guddigu wuxuu ku faraxsan yahay inuu la shaqeeyo mid kasta oo ka mid ah jaaliyaddan si loo qorsheeyo mustaqbalka shaqooyinka gaarka loo leeyahay ee qoysaska Washington, ”ayuu yiri Guddoomiyaha CERB Steve Anderson.
Brian Bonlender, oo ah agaasimaha waaxda ganacsiga ee gobolka Washington ayaa yidhi: "Hadafka CERB ee ah abuurista shaqooyin iyo dhisida dhaqaale waara oo ku socda bulshada gobolka oo dhan waxay muhiim u tahay dhamaan reer Washington. Shaqadeena CERB waxay ka caawineysaa dowladaha hoose iyo qabaa'ilka inay maalgeliyaan aragtidooda mustaqbalka.
Laga soo bilaabo 1982, CERB waxay ku dhowaad $ 206 milyan u goysay maamullada maxalliga ah ee gobolka oo dhan, maalgashi abuuraya in ka badan 34,000 oo shaqo, iyo maal-gashiga raasumaalka gaarka loo leeyahay oo ah $ 5.7 bilyan ($ 27 ilaa $ 1) oo ku soo noqoshada maalgashiga CERB.
Maaddaama ay tahay ilaha istiraatiijiga ah ee horumarinta dhaqaalaha Washington, CERB waxay diiradda saareysaa abuurista shaqooyinka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyadoo lala kaashanayo dowladaha hoose iyadoo maalgelinaysa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Horumarintani waxay dhiirigalineysaa horumarinta ganacsiga cusub iyo ballaarinta. Marka lagu daro maalgelinta mashaariicda dhismaha, CERB waxay siisaa maalgelin xadidan daraasadaha qiimeeya mudnaanta sare leh mashaariicda horumarinta dhaqaalaha. Ka baro wax badan oo ku saabsan CERB at www.commerce.wa.gov/cerb.
Qabiilka Indian Cowlitz: Christine Myers, Qorsheeyaha Qabyaaladda, 360-353-6461
Magaalada Washougal: David Scott, Maamulaha Magaalada, 360-835-8501
Magaalada Aberdeen: Erik Larson, Duqa Magaalada, 360-537-3227
Degmada Pacific: Mike Collings, Agaasimaha / Injineerka Magaalada, 360-875-9368
Kalispel Qabiilka Hindida: Sev Jones, Agaasimaha Mashaariicda iyo Qorshaynta, 509-671-2292
Magaalada Tumwater: Heidi Behrends, Kaaliyaha Maamulka Magaalada, 360-754-4128
← Waxaan nahay # 1 tiknoolajiyadda iyo hal-abuurka gobollada ugu sarreeya Ameerika ee Ganacsiga 2016 WARKA DIIWAANKA: Xafiiska Gobolka Washington ee Dhallinyarada Hoylaawayaasha ah ayaa ku abaalmariyay deeqo $ 2.5 milyan ah →